प्रधानमन्त्री तथा अर्का अध्यक्ष ओलीकै सक्रियतामा नेकपा एमाले दर्ता भएको प्रचण्डको आरोप – Kanika Khabar
प्रधानमन्त्री तथा अर्का अध्यक्ष ओलीकै सक्रियतामा नेकपा एमाले दर्ता भएको प्रचण्डको आरोप
Kanika Khabar ९ श्रावण २०७७, शुक्रबार १४:२२ July 26, 2020 मा प्रकाशित
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै सक्रियता र पहलमा नेकपा एमाले दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन गरेको दाबी गर्नुभएको छ । पुष्पलाल श्रेष्ठ र नरबहादुर कर्मचार्यको स्मृति दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीमा अब के हुन्छ ? महाधिवेशन हुन्छ कि हुन्न ? पार्टी विभाजन त हुने होइन भन्ने आम कार्यकर्ताको जिज्ञासा प्रति आफू जानकार रहेको बताउनुभयो । कम्युनिस्ट पार्टी भनेको सामूहिक नेतृत्वमा चलने र व्यक्तिगत जिम्मेवारी लिएर हिँड्नुपर्ने भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो पार्टीमा सामुहिक नेतृत्व नभएको धारणा राख्नुभयो ।
कम्युनिस्ट विचार, माक्र्सवाद अनुसार पार्टी भनेको विवेक र सरकार भनेको सत्ता भएको भन्दै उहाँले सत्ताले पार्टीमाथि हैकम जमाउने स्थिति आएको बताउनुभयो । यस्तो अवस्था वैज्ञानिक मान्यताभन्दा बाहिरको हुने अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ थियो । पार्टीले जनतालाई सुशासन दिन्छौं भनेको तर भ्रष्टाचारसँग जोडिएर श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा उठेका प्रश्नहरूको निरुपण गर्न कति सफल भयौं वा भएनौं ? भनेर हेर्नुपर्नेमा अध्यक्ष प्रचण्डले जोड दिनुभयो । नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने पार्टीको निर्णय भएको पनि बताउनुभयो ।